Efa naka ny myers-Briggs ve ianao? ENTP? | Martech Zone
Efa naka ny myers-Briggs ve ianao? ENTP?
Alatsinainy, May 5, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Isika rehetra dia mankahala ny fanipazana ao anaty siny, saingy nifampiresaka tamina olona tao amin'ny Myers-Briggs aho. Tsy niova mihitsy ny valiny tato anatin'ny folo taona lasa, ENTP aho. Ity misy ampahany:
ENTPs dia manome lanja ny fahafahany mampiasa sary an-tsaina sy fanavaozana hiatrehana olana. Matoky ny fahaizany mamoaka azy ireo amin'ny olana, matetika izy ireo dia manao tsinontsinona ny fiomanana ampy amin'ny toe-javatra misy. Io toetra io, ampiarahina amin'ny fironany hanambany ny fotoana ilaina amin'ny famitana tetikasa, dia mety hahatonga ny ENTP ho lava loatra, ary hiasa matetika mihoatra ny fetra antenaina. Ny manahirana an'ity toe-javatra ity dia ny filan-kevitr'izy ireo hanandramana vahaolana vaovao. Izany dia mahatonga azy ireo hazoto hiroso amin'ny fanamby manaraka rehefa mankaleo ny raharaha. Ny ENTPs dia lasa adin-tsaina rehefa tsy mandaitra ny fahaizany manatsara ny toetrany ary hisoroka ny toe-javatra mety tsy hahomby izy ireo.
Raha mitohy ny adin-tsaina dia lasa variana ny ENTP ary atahorana ny fihetsika "mahavita" azy ireo. Ny fahatsapana ny tsy fahaizana, ny tsy fahaizan'ny olona ary ny tsy fahaiza-mitantana no manjaka. Mila mandositra ireo toe-javatra mifandraika amin'ny tebiteby izy ireo izay malaza kokoa amin'ny ENTP noho ny karazana toetra hafa rehetra. Ny fisalasalana raha toa ka hanana izay ilaina izy ireo hanatanterahana asa iray, dia mamindra ny tahotra amin'ny toe-javatra mety hialany izy ireo. Ny fikorontanana, ny tahotra ary ny tebiteby dia manakana ny fanehoana ny fahaizan'izy ireo mamorona. Ny fanehoan-kevitra phobic fiarovana dia mahatonga ny ENTP hanodinkodina ny zava-bita amin'ny faritra hafa ary hanakana ny fahombiazana izay ezahany.
Mahagaga (sy mahasosotra) ny maha marina ahy io famaritana io amiko. Raha te hitady ny toetranao ianao dia misy betsaka loharano an-tserasera. Myers Briggs dia afaka manampy anao amin'ny fifandraisanao amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa hafa, ary koa manome ny fahitana ireo faritra mety ilainao hifantohana mba hahomby.
Tags: zanagrexitjim irsayfitomboan'ny findayam-baravarankelywindows phone
May 5, 2008 amin'ny 9: 22 AM
ENTJ aho. Manaiky tanteraka aho - marina marim-pototra ireo valiny ireo.
May 5, 2008 ao amin'ny 12: 29 PM
Doug, ianao koa dia Taurus, noho izany ianao dia olona tsy miovaova, mpandala ny nentin-drazana, tia trano izay hanao namana na mpiara-miasa mahatoky hatrany. Izaho koa dia naheno anao toy ny fitsangantsanganana lava eny amoron-dranomasina amin'ny filentehan'ny masoandro.
Ny olona dia mazàna mamantatra amin'ny ampahany amin'ny fitsapana toetra izay azony ekena ekena. Na dia ao amin'ny tranokala Myers-Briggs aza dia nambaran'izy ireo fa ny valiny dia tsy mitombina 15-47% amin'ny fotoana. Tena misalasala aho amin'ireo fitsapana ireo. Na dia fanahy iniana aza no nataoko ireo fitsapana ireo, ary mbola nanana mpiara-miasa / mpampiasa aho nahatsapa fa ny valiny dia naneho ny toetrako, (ary nanandrana nanatanteraka izany.)
Valio ny "Eny" amin'ireo fanontaniana rehetra amin'ny fitsapana Myers-Briggs amin'ny Internet, ary jereo raha mbola afaka mamantatra ny valiny ianao. (Aza miraharaha ireo litera sy valiny azonao foana.)
May 5, 2008 ao amin'ny 1: 22 PM
Aries aho… tadidio mafy loha ?!
Sep 17, 2008 ao amin'ny 10: PM PM
Andriamatoa Douglass, te-hanao fanamby aminao aho handinika ny hakana ny Myers Briggs amin'ny tontolo etika sy etika. http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html
Hitanao, rehefa ampiharina araka ny tokony ho izy izany, azonao atao ny manapa-kevitra arakaraka ny fahitana ny dikan'ny safidinao rehetra, inona ny safidinao anaty. Tsy mifanaraka amin'ny etika, araka ny niniana ny Myers Briggs, ny handray ny tombana ary avy eo dia ho faritan'ny karazana notaterinao. Rehefa vita etika dia misafidy ianao (safidin'ny tena), avy eo ampitahanao amin'ny karazany notaterina, ary avy eo ANDAO manombatombana ny roa hahalalana ny TYPE FITTITRA FITIAVAO. DIA… ary avy eo, vao zatra tanteraka amin'ny fahafaha-manaony tanteraka ny Myers Briggs: manampy anao hahafantatra bebe kokoa momba anao, mba hahatakarana tsara ny olona. Zahao hoe http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html kinova an-tserasera ny fomba etika hahitana ny tenanao amin'ny alàlan'ny Myers Briggs Type Indikator. Tena mahafa-po izany, raha tsara fitantanana. Mihobia amin'ny dia mankany amin'ny fahalavorariana…
May 6, 2008 ao amin'ny 3: 39 PM
Heh, mahatsikaiky, ENTP koa aho (borderline INTP). Ary ireo famaritana ireo dia hita eo, farafaharatsiny ho ahy.
May 11, 2008 ao amin'ny 5: 05 PM
ESTJ aho eto!
May 11, 2008 ao amin'ny 8: 18 PM
Tsy maninona na impiry na impiry aho no manao ireo fitsapana ireo (na iza amin'ireo fitsapana ataoko ireo) dia mivoaka mitovy hatrany izany. Ka heveriko fa mifikitra amin'izany aho (ary mety ihany koa…)
Ary Aries aho 🙂
Aug 23, 2008 amin'ny 2: 33 AM
Mahafinaritra izany. ENTP + Aries koa aho. Hitako ny famaritana ho an'ny roa tonta ary marina ho ahy izany
Dec 28, 2012 ao amin'ny 2: PM PM
Ramatoa ENTP aho, hanomboka tompony amin'ny Marketing sy ny famoronana any Londres. Mbola tsy nanangana ny tenako momba ny tsenan'ny asa aho. Misy torohevitra ambony ao an-tsainao ho ahy Andriamatoa Karr? 🙂
@yasminebennis: disqus tokony ho folo taona lasa izay dia nanomboka nanao bilaogy aho ary nanova ny fiainako izany. Ankehitriny ny bilaogy dia ivon-toeran'ny masoivohako (DK New Media). Natomboka tamin'ny fizarana ny zavatra hitako sy ny zavatra niainako tamin'ny Internet tamin'ny rehetra… Nanangana fahefana sy anarana tsimoramora teo amin'ny toerana hajaina aho. Miezaka ny hanana lafy tsara foana aho ary hizara ny toetrako koa (na dia nifikitra tamin'Andriamanitra sy ny politika aza aho). Heveriko fa ny fanombohana ny bilaoginao manokana na ny fangatahana ho lasa mpanoratra mpandray anjara amin'ny iray mahaliana anao dia fomba iray tsara hanombohana.
Hafahafa ity! Vao nanapa-kevitra ny hamorona bilaogy aho 4 andro lasa izay! Amin'ny alalany no hiresahako ny lafiny famoronana amin'ny Zavakanto, Orinasa ary ny fiainana isan'andro. Tiako ny fomba fijerinao raha efa vonona! Misaotra anao nanome valiny haingana !!
Dec 30, 2012 ao amin'ny 9: PM PM